SCIENCE Archives - Tamban RELAY
Ichi chidzidzo chinogona kushandura zvaunofunga kuti unoziva nezve coronavirus - BGR
Vatsvagiri svondo rino vakaburitsa yakagadziriswa coronavirus yakasungirirwa kuratidzira mumaguta akakomberedza US zhizha rino. Vanoda kusvika zviuru makumi mana vanhu vakaongororwa kuti vaone kuti pane chisina kunaka kuwirirana pakati pevanhu vano…
Ruva iri rakanga rakakura kukunda mhuka yenguva yaro
Makona emazuva ano anowanzoonekwa semarara ekugara, sezvo mutsara wavo uchidzoka mamirioni nemamiriyoni emakore. Iwo atinoona nhasi haana kusiyana kubva kune mamwe marudzi ayo ...
Iyi gomoronivirus yekudzivirira inogona kunge iine mukana mukuru pamusoro pevadzivisi vayo - BGR
Yekutsva coronavirus yekudzivirira kugadzirisa ine chekuita naJohnson & Johnson, uyo mushonga wekuyedza uchangopinda Phase 1 yemiedzo yevanhu. Mumiriri wekudzivirira akauya nehunyanzvi hwekudzivirira kupindura mhungu nehuku rimwe chete ...
Nzira inonyanya kuzivikanwa yekuona coronavirus haina basa kune rimwe boka revanhu -…
Vanotsvaga vanoongorora vanosvika zana varume vakaedza kuti vataone COVID-100 inoratidza kuti kupisa kwemuviri hakuite senzira yakavimbika yekuona hutachiona hwekoronavirus. Pavarume makumi masere nesere vari pakati pamakore gumi nemasere nemakumi maviri neshanu, vashoma chete vaive…
ATTOL chirongwa: Airbus ikozvino inofungidzira kubhururuka ndege yekutengeserana inoshanda zvakasununguka
Iyo yekuEurope yekugadzira ndege yekugadzira ndege ichangobudirira yakagumisa makore maviri ekuedzwa kwendege. Iye zvino anofungidzira kuita iyo ATTOL autonomous airliner chirongwa chaicho. Yepamberi kuona kombiyuta uye kudzidza ...
1 2 3 ... 108 chinotevera